août 2013 – filazantsaramada
MAMAKY NY SORATRA MASINA AMIN’NY SAINA MANDINIKA…
“Aoka hisaina izay mamaky izany” (Matio 24:15b) Ilay takela-pahatsiarovana ny ady tany Vietnam dia maneho ny anaran’ireo izay maty tamin’iny ady iny. Na dia notandremana fatratra aza ny fanaovana ny lisitra misy ny anaran’ireo maty an’ady, dia nisy ihany anaran’olona telo izay tsy maty tany amin’io ady io akory kanefa voasoratra tao. Ny fahadisoana dia […]
Publié parfilazantsaramada août 30, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MAMAKY NY SORATRA MASINA AMIN’NY SAINA MANDINIKA…
Mitohy indray ny asa famokarana Anisan’ny fitaovam-pifandraisana iray eto amin’ny Feon’ny Filazantsara ny Gazety “Akon’ny Feon’ny Filazantsara”. Gazety miseho intelo isan-taona izay mikendry indrindra ny hitondrana ny akon’ny fiaraha-miasa izay misy eo amin’ny Feon’ny Filazantsara sy ny Fiangonana isa-toerana, na Ivon-toerana , sy ny olona tsirairay. Tsy izany ihany fa miezaka koa izahay mitondra vatsim-panahy […]
Publié parfilazantsaramada août 28, 2013 septembre 30, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Gazety “Akon’ny Feon’ny Filazantsara”
“Ary nahita aho fa, indro, ny tanàna masina, dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin’Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa mihaingo hihaona amin’ny vadiny” Apokalypsy 21: 2 Ao amin’ny boky nosoratan’i Charles Dickens nampitondrainy ny lohateny hoe Great Expectations (azo adika hoe Fanantenana Lehibe) dia asehony ny nanjo an-dRamatoakely Havisham izay voapetrapetraka tamin’ny alin’ny […]
Publié parfilazantsaramada août 23, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY MPAMPAKATRA SY NY AMPIAKARINA (ANY AN-DANITRA)
“Fa samy alaim-panahy ny olona raha tarihin’ny filany sy fitahiny izy. Ary ny filana rehefa torontoronina, dia miteraka ota; ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana.” (Jak 1:14-15) Ny filana dia zava-misy eo amin’ny maha olombelona. Ohatra ny rano dia manana toerana betsaka eo amin’ny tenan’ny olona ka ilainy amin’ny fahavelomana ; toy izany […]
Publié parfilazantsaramada août 16, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur RAHA TORONTORONINA NY FILANA DIA MITERAKA OTA
Club FF Lycée Nanisana Toy ny fanao isan-taona ho famaranana ny taom-pianarana sy ho fitondrana am-bavaka ny taom-pianarana ho avy dia tonga mamangy hatrany sy miara-mivavaka eto @ Foibe FF ireo mpikambana ao @ Club FF. Ho an’ny taom-pianarana 2012/2013 dia ny Zoma 19 Jolay folak’andro no nanatanterahana izany. Fotoana izay iarahan’ireo mpiara-miasa ao amin’ny […]
Publié parfilazantsaramada août 14, 2013 septembre 30, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fiaraha-miasa FF/ Lycée Nanisana
« Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara, dia aoka izy hitandrina, fandrao ho lavo. » 1 Kor 10:12 Tamin’ny namoronan’Andriamanitra ny olombelona, dia nampijoro ny olona izy: nataony ho mpanjaka ny olombelona, hanjaka amin’ny zava-boahary rehetra. Jehovah Andriamanitra mihitsy no nametraka azy amin’izany toerana izany. Noho ny famitahan’ny menarana anefa dia niala tamin’izany toerana izany […]
Publié parfilazantsaramada août 9, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FIJOROANA
Fandaharana amin’ny Fampielezam-peo
Fanatsaràna ny Fandaharana Tiana ihany ny mampahatsiahy fa nanomboka tamin’ny Martsa 2010 no namokaran’ny Feon’ny Filazantsara ny Fandaharana “Henoy ny feony”. Onjam-peo tsy miankina efatra eto Madagasikara amin’izao fotoana izao no efa andefasana io Fandaharana io (roa eto Antananarivo: RTF 91.2 FM sy ACEEM 103.4 FM, iray any Toamasina: RNA 94. 2 FM ary iray […]
Publié parfilazantsaramada août 8, 2013 septembre 30, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fandaharana amin’ny Fampielezam-peo
ANDRO NAHATERAHANA FAHAROA HO AN’I PAOLY APOSTOLY.
“Ary raha nandeha izy, dia tonga teo akaikin’i Damaskosy; ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra tampoka manodidina azy.” Asan’ny Apostoly 9:3 Hoy ity vehivavy iray vao avy natao fandidiana sarotra tany amin’ny toeram-pitsaboana iray ka sitrana soaman-tsara: “Tsapako ho ohatran’ny manana andro nahaterahana roa aho: ny iray, ilay andro tena nahaterahako dia tamin’ny volana […]
Publié parfilazantsaramada août 2, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur ANDRO NAHATERAHANA FAHAROA HO AN’I PAOLY APOSTOLY.